काठमाडौं, ४ असोज । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि युवाहरुले चासो दिनुपर्ने बताएका छन् ।
समानताले मात्र समृद्धि ल्याउँछ : मुख्यमन्त्री राउत
जनकपुरधाम, ४ असोज । मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउतले समानताले मात्र प्रदेशमा समृद्धि ल्याउने बताएका छन् ।
भारतका दुई एयरलाइन्सले काठमाडौंमा उडान सुरू गर्दै
काठमाडौं, ३ असोज । नेपालमा थप तीन विदेशी एयरलाइन्सले उडान गर्ने तयारी गरेका छन् । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने भन्दै उनीहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
संविधान दिवसमा भारतको शुभकामना
काठमाडौं, ३ असोज । भारतले नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल सरकार र नेपाली जनतामा हार्दिक शुभकामना दिएको छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री–मन्त्रीहरुद्वारा संविधान दिवस बहिष्कार
जनकपुरधाम, ३ असोज । संविधान दिवस २०७६ भव्यरुपमा मनाउने निर्णय गरेको प्रदेश २ को सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले कुनै कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन् ।
कलैयामा राजपाद्वारा विरोध प्रदर्शन
बारा, ३ असोज । संविधान दिवसको विरोधमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बाराको कलैयामा बृहत् विरोध रैली निकालेको छ ।
प्रादेशिक मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समिति उपाध्यक्षमा खाँ
कपिलवस्तु, २ असोज । प्रादेशिक मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समिति सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको अध्यक्षतामा रहने गरि मदरसा शिक्षाका क्षेत्रमा निकै संघर्षशील व्यक्तिका रूपमा चिनिएका कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं. ३ चैपुरवाका मशहुद खाँलाई बिहीबार उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्यालय छड्केमा प्रध्यानाध्यापकसहित १० जना शिक्षक फेला
रौतहट, २ असोज । रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिकाअन्तर्गत संचालित रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको बिहीबार गरिएको छड्के अनुगमनको क्रममा १० जना शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित फेला परेका छन् ।
जापानमा सुनैनाको मिथिला चित्रकला प्रदर्शन
काठमाडौँ, २ असोज । कलाकार सुनैना ठाकुरको एकल मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी जापानको टोकियोमा भइरहेको छ ।
प्रदेश २ का कर्मचारीले मनाए संविधान दिवस
जनकपुरधाम, २ असोज । प्रदेश २ मा संविधान दिवस अन्तर्गत पहिलो दिनको कार्यक्रम मनाइएको छ ।
तोडफोडमा मुछिएकालाई सफाइ
जनकपुरधाम, २ असोज । जानकी मन्दिर तोडफोड मुद्दाको जिल्ला अदालत धनुषाले चार वर्षपछि फैसला सुनाएको छ । घटनामा मुछिएका तत्कालीन मधेश आन्दोलनका ८ जना अगुवाले सफाइ पाएका हुन् ।
हरियाणामा इन्डो–नेपाल हिन्दी विमर्श
काठमाडौं, २ असोज । भारतको हरियाणामा हिन्दी दिवसको अवसरमा इन्डो–नेपाल हिन्दी विमर्श एवम् पुरस्कार समारोह आयोजना गरिएको छ ।
सवारी ज्यान मुद्धाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
बर्दिया, २ असोज । सवारी ज्यान मुद्धाका फरार प्रतिवादी बर्दिया गुलरिया नगरपालिका–८ बस्ने ३१ वर्षीय दशरथ थारु (चौधरी) लाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बाँके, २ असोज । कोहलपुर नगरपालिका–१३ स्थित रामजानकी सामुदायिक वनमा कोहलपुर नगरपलिका–१० मुन्नापुर बस्ने ८० वर्षीय सक्कर रावत बिहीबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
कैलाली, २ असोज । धनगढी उपमहानगरपालिका–८ को वडा कार्यालयमा गएराति अज्ञात समूहद्वारा आगजनी भएको छ । राति करीब १० बजेको समयमा कार्यालयको झ्यालका शिशा फुटाएर पेट्रोल भरिएको मिनरल वाटरको बोतलभित्र फालेर आगजनी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
विद्यालयको सामाजिक परीक्षण सम्पन्न
कपिलवस्तु, २ असोज । श्री अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालय बैदौलीले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । हालसम्म विद्यालयले गरेका गतिविधि र आगामी दिनमा विद्यालयले गर्ने कार्यका विषयमा सामाजिक लेखा परीक्षण गरेको हो ।
महोत्तरी खुल्ला दिशामुक्त घोषणा
जनकपुरधाम, २ असोज । महोत्तरी जिल्लालाई एक कार्यक्रम बीच खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरिएको छ । जलेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले घोषणा पत्र बाचन गर्दै महोत्तरी जिल्लालाई खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरेका हुन् ।
कुटपिट मुद्दा फरारहरु पक्राउ
वीरगन्ज, १ असोज । कुटपिट मुद्दामा अदालतबाट सजाय भई विगत ९ वर्ष देखि फरार व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
रुपन्देही, १ असोज । जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका १ डण्डाबाट एपीएफ टोलीले करीव चार लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारीको जुत्ता बरामद गरेको छ ।
प्रदेश २ को तथ्यांकसहितको पुस्तक फ्याक्ट्स विमोचित
जनकपुरधाम, १ असोज । मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले प्रदेश नं. २ को तथ्यांकसहितको पुस्तक फ्याक्ट्सको विमोचन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री राउतले पुस्तकको विमोचन गरेका हुन् ।
प्रदेश ५ खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र
मणि प्रसाद गैह्रे, कपिलवस्तु, १ असोज । प्रदेश नं ५ मा बाँकी रहेको कपिलवस्तु जिल्लालाई एक समारोहका साथ सदरमुकाम तौलिहवामा दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
तीन भाषामा मोदीलाई ओलीको जन्मदिन शुभकामना
काठमाडौं, १ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ट्वीटरमार्फत तीन भाषामा जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । तीन भाषामा लगातार ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना दिएका हुन् ।
रुपन्देही, ३१ भाद्र । जिल्लाको रोहिणी गाँउपालिका २ स्थित लखौतियाबाट एपीएफ टोलीले विभिन्न किसिमको लागूऔषधसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईद्वारा सिसिटिभी उद्घाटन
मोरङ, ३१ भाद्र । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश नम्बर १ सरकारको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा जडान सम्पन्न भएको सिसिटिभीको सोही कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमबीच उद्घानटन गरेका छन् ।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमप्रति स्थानीय तह प्रमुखहरु असन्तुष्ट
राकेश यादव, रौतहट, ३१ भाद्र । जिल्ला समन्वय समिति रौतहटको आयोजनामा सोमबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गौरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ ।